Kupemberera Gay Pride muPenienix
Nyika dzakabatana Texas Austin
Chimwe chekutanga chekuzvikudza gay zviitiko mumunyika, Phoenix Pride inoitika kutanga kweApril. Nguva yakakwana, iyo inopa unyoro, inonaya yezuva iri pakati peArizona panguva ino yegore.
Kuti ndikupe pfungwa yezvaunogona kutarisira munguva yekupemberera kweChede yeguta, hezvino tarisa kumashure pamusangano wegore rapera:
Chiitiko cheChitukuro cheguta ichi chave chidimbu chikuru mumakore achangobva kupfuura, kunyanya sezvo inotora vatori vechikamu uye vataridzi kubva munzvimbo yose inokura iri kukura, kusanganisira Scottsdale, Mesa, uye Glendale, kusataurira vanhu vashomanana veBGBT kubva kuTucson (iyo yakave iro rayo pachayo Inyeredzi muDheni rekugadzirira uye kupemberera pakati pemwedzi waOctober).
Vanenge zviuru makumi matatu nezviviri vakapinda kuChede gore rapera. Phoenix inoburitsawo mazuva ano neguta rakadzoserwa rinosanganisira yakanaka, inoshanda yakajeka yepamusoro-soro (inotenderera kubva kuchamhembe kwakadziva kumadokero Phoenix nechokuchamhembe kweguta kusvika ku Tempe neMesa) nedzimwe nzvimbo itsva dzekudyara, mahotera, uye gay bars nemabhodhoro eusiku.
Kutsvaga mazano pamusoro pekugara kupi panguva yekuChengeta? Tarisa kunze kweFenix ​​uye Scottsdale Gay Hotels uye Resorts Guide
Chokutanga, kunyange zvazvo zviitiko zvikuru zvichiitika mavhiki ekudada, varongori vanopawo mazuva gumi ekuzvikudza, ruzhinji rwekuungana uye mapato anotungamirira kusvika kuKuzvikudza kwevhiki, kutanga kwevhiki. Izvi zvinosanganisira zuva remhuri, kuzvikudza kwemhuka, Echo Magazine Reader's Choice Awards, kuratidzwa kwemafirimu Homestretch paMesa Public Library, uye nezvimwe zviitiko zvakakurumbira.
Phoenix Pride Weekend inosanganisira Pride Parade, inoitwa musi weSvondo, uye inopera paChitubu cheSpecial in Steele Indian School Park 10 am pamwe chete (3rd Street kubva Thomas Road kumaodzanyemba kuIndia School Road).
Kana uri kusvika nechitima chechiedza, iwe unofanirwa kubhadhara mari iyo ndiyo Thomas Road kana Indian School Road inomira paCentral Avenue.
Pachave nezviitiko zvinopfuura 150 zviri kurarama mutsva pazvikamu zvishanu zvevashambadziri paPoenix Pride vachiita pamatanho akasiyana-siyana: Bug Light Main Stage (ine hurukuro yekuita zviito), Tish Tanner Community Stage (vatauriri vemunharaunda, vanoita vechidiki, uye vagari vemunharaunda), Kuzvikudza Dance Pavilion (kufunga club tunes), Bistro Stage (a bit mellower pamimhanzi - jazz uye acoustic), uye Pride Metro Stage (kusanganiswa nemitambo yemimhanzi inopiwa neDVDs).
Iwe unogona kutenga matikiti paIndaneti kana, zvimwe zvishoma, pasuwo.
Pane imwe yeruzivo rwakafanana, munguva yevhiki nevhiki pamberi pePede, munhu mukuru wekuona zvinonyadzisira uye anowanikwa muIndaneti Megausttore anobata mutambo weHero World - purogiramu inosanganisira kutengesa mhando, "Romantasy Cabaret", vatambi vekudaidzira, nezvimwewo. Ichi ndicho chiitiko chekusununguka, chakasununguka kune avo vane makore gumi nemasere kana kupfuura.
Nzvimbo dzakawanda dzomukomana muPhoenix neS Scottsdale , pamwe nemasitadhi anozivikanwa nevarume, mahotera, uye mabhizinesi, ane zviitiko zvakakosha uye mapato muWedde Week. Tarisa mapepa emunharaunda emunharaunda, akadai seEcho Magazine kuti uwane mamwe mashoko, pamwe chete neAyy Gay Pride Guide. Uyezve tarisa nzvimbo yakanakisisa yeBelbT site yakabudiswa nehurumende yehurumende yezvekushanyirwa, guru rinonzi Greater Phoenix Convention & Visitors Bureau.
Uyewo ona kuti Phoenix inogadzira chiitiko chikuru cheGGBT pakati pemwedzi waOctober, iyo Rainbows Festival Street Fair, iyo inoitika mudhorobha rePenienix inonzi Heritage Square Park.
Kunakidzwa Kunze Kunze Kunakidza
Mhosva Dzakanyanya Kudzivirira Paunoshanyira Austin
Best Tex-Mex muAustin
Top 10 Halloween Costume Stores muAustin
Nyoka kana Kucheka Fodya: Ndeye Mutemo muIreland?
Zuva Guru Rinobva kuSt. Louis
Mutungamiri wekutengesa kuLas Vegas
Gettysburg Remembrance Day Parade uye Chiedza 2017
Mhando 12 dzakanakisisa dzePiza muBrooklyn
Canoe Bay muWisconsin
Nzvimbo dzakanakisisa dzekudya Kudya neNew Orleans Superdome
Ryanair Near-Misses, Emergency Landings and Other Near Misses
Mutungamiri kuMutambo weMakona paShongwe yeLondon
Henna Tattoos paDisney World
Nzira yekubva kuLondon, UK uye Paris kuBlois nechitima, bhazi nemotokari
Drive In Movie Theaters in Oklahoma City